Apple waxay furaysaa degel ku takhasusay qaabeynta qalabkiisa kuwa yaryar | Waxaan ka socdaa mac
Carruurta yaryari waxaa si isa soo taraysa loo arkaa iyagoo haysta aalado elektiroonig ah oo ay iyagu wataan. Laga soo bilaabo kiniin ilaa casriga ah. Mid ka mid ah walwalka ugu weyn ee waalidiinta ayaa ah sida loo baro caruurteena yar yar waxa la sameeyo iyo waxa aan la sameyn. Tani waxaan u qaabeyneynaa qalabka iyo sidaas darteed Apple waxay abuurtay degel gaar ah u heellan kan ugu yar iyo kan ugu da'da weyn. Si ay wada jir ugu wada faa’iideystaan.
Websaydhka cusub ee khaaska ah ee loogu talagalay inuu kula taliyo waalidiinta sida loo hagaajiyo qalabka carruurtooda
Apple waxay samaysay degel cusub oo khaas ah oo ay ugu magac dartay "Apple for kids" taas oo ay ka mid tahay waxbarashada waalidiinta oo ku saabsan sida loo isticmaalo Nidaamka Qoyska, waxa la sameeyo marka ilmuhu iloobo furaha sirta ah, iyo waxyaabo kale oo badan. Taasi waa in la yiraahdo, yimaado si looga jawaabo su'aalo badan oo waalidku qabo Waxaan nafteena qabanaa markaan rabno inaan ilaalino amniga iyo sirta qaangaarka yar.
Tani ma aha dood ku saabsan in cunuggu haysto qalabka elektaroonigga ama da'da uu ku qaadan karo. Apple wuxuu u maleynayaa in carruurta mar uun ay mid yeelan doonaan waalidkoodna waa inay lahaadaan qalabka lagama maarmaanka ah sidaa darteed ma jiraan wax cabsi ah. Taasi waa sababta websaydhkani u dhashay.
Ka dib soo bandhigida dejinta yaqaan ee leh Apple WatchSE, Apple hadda waxay leedahay dhowr dariiqo oo waaliddiintu uga caawin karaan carruurtooda isticmaalka aaladaha Apple. Boggan cusub waxaa loo sameeyay meel laga raadiyo oo laga helo dhammaan macluumaadka taageerada qoysaska oo dhan.
Degelkan gaarka ah wuxuu ka bilaabmaa mowduuca guud ee sida loo maareeyo kooxda qoyskaaga. Waxaa jira arrimo dhowr ah oo laga wada hadlayo. Tusaale ahaan, kuwa ugu dhibka badan ama ugu muhiimsan waa:
.- Maxaa la sameeyaa hadii wiilkeena iska ilow koodhkaaga marinka
.- Maxaa dhacaya haddii wax ku iibsado shil. Tilmaamaha ka-hortagga ee qaybta loo yaqaan "Diiwaanka waxqabadka ilmahaaga." Halkaas, Apple waxay faahfaahin ka bixineysaa sida loo qaabeeyo "Codsi iibsi" markaa waa inaad oggolaataa iibsi kasta.
Carruurta ka weyn 13 sano, waxaa jira hage tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida ay u soo geli karaan ama u cusbooneysiin karaan taariikhda dhalashada ee la xidhiidha Aqoonsiga Apple. Si kastaba ha noqotee, "haddii ilmahaagu ka yar yahay 13 sano," waxaan u baahan doonaa inaan la xiriirno taageerada farsamada Apple si aan u helno tallaabooyin dheeraad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple wuxuu furayaa degel ku takhasusay qaabeynta qalabkiisa kuwa yaryar
Apple TV + waxay heshaa tiro aad u tiro badan oo macaamiil ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dokumenteriga uu qoray Billie Eilish